Goatemalà: Fampiasana Ankizy Any An-tsaha Fambolena Fary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2012 7:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Italiano, Svenska, Dansk, 日本語, Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetin'ny Plaza Publica tao Goatemalà no nahitana ny mpitondra ao amin'ny fitondrana, izay manana adidy araka ny lalàna hisoroka ny fampiasana zaza, mamela ny zaza latsaky ny 14 taona hiasa eny amin'ny saha fambolena fary, toerana ilana herintsandry sy mampidi-doza.
Singam-pary navoakan'i Chris McBrien CCBy
Ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Fampiasana ankizy sy ny famokarana fary ao Goatemalà i Alberto Arce sy i Martín Rodríguez Pellecer no mamahavaha ny fomba fampiasana ny ankizy any antsaha fambolena fary fa araka ny lanjan'ny [fetra] fary tapaka ny karama raisina. Raha mahatapaka roa na telo taonina ny ankamaroan'ny mpiasa lehibe, dia tsy mahatratra ny karama farany ambany akory izany, eo ho eo amin'ny 7,5 dôlara amerikana isan'andro. Ny iray amin'ny fianakaviana nifampitafatafana, izay ahitana raim-pianakaviana miasa miaraka amin'ny zanany roa, ny iray 12 ary ny hafa 13 taona, dia tsy mahavita mahazo ny karama farany ambany eo amin'izy telo mianaka.
Manaraka izany ity lahatsary fohy ity raha nandeha tany amin'ny saha fambolena fary izy ireo naka sary tamin'ny fakantsary fahagola vita tamin'ny hazo. Tao amin'ny lahatsoratra:
Ao amin'ny twitter, tamin'ny tenifototra #11deazucar, niezaka tsy hifantoka amin'ny fiahiana ny fiainan'ireo ankizy ireo ny mpanao gazety Goatemalteka Alejandra Gutierrez :
Tsy zava-baovao izany ankizy mpiasa eny amin'ny tany fambolena izany: raha iverenana ny taona 2007, dia nisy nampiditra tao amin'ny YouTube ity lahatsary misy ny sarin'ny mpiasa eo amin'ny saham-pambolena fary ahitana ankizy maro ity ao Goatemalà.
Nisy vokany ny lahatsoratra sy ny fanadihadiana saingy indrisy tsy araka ny nantenaina. Nandefa hafatra ao amin‘ny twitter ny mpanao gazety Alberto Arce fa na dia nampitsahatra ny asa vokatry ny lahatsoratra momba ny fary ao amin'ny @PlazaPublicaGT aza ny Tany Fambolena Finca Flamenco, dia misy ny mpiasan'ny fary very asa ao Retalhuleu.